Gaas oo Nairobi kula shiray Baanka Aduunka & shirkad amaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas oo Nairobi kula shiray Baanka Aduunka & shirkad amaan
Nairobi – Mareeg.com: Madaxwaynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta kullan dalka Kenya kula qaatay Madaxda Bangiga Aduunka (World Bank), Madaxda Hay’adda Newport Security Company iyo Safiirka Kenya u jooga Soomaaliya.
Madaxwayne Gaas iyo Madaxda Bangiga Aduunka ayaa waxa ay kawada hadleen (Infrastructure development) – dhisida kaabayaasha dhaqaalaha, (Public Financial Management) – Agaasinka maaliyadda dowliga ah, (Civil Service Reform) – Habaynta shaqaalaha rayid’ka ah, (Capacity Building support) – Tageeridda tayeenta shaqaalaha, iyo xoojinta xiriirka wanaagsan ee Bangiga iyo Puntland.
Madaxwayne Gaas ayaa cadeeyay in lagama maarmaan ay tahay in Bankiga Aduunku uu maamulka Puntland ka taageero dhisida kaabayaasha dhaqaalaha sidookalana taageero tayeynta shaqaalaha oo muhiim ah si Puntland u hormarto.
Kor uqaadida Xiriirka Wada shaqyn ee u dhaxeeyay Dowlada Puntland iyo Sidookale Bangiga Aduunka ayaa laysla meel dhigay labada dhinac mudadii uu shirki socday.
Sidookale Madaxwayne Gaas ayaa lakulmay Madaxda Hay’ada Amniga ee Newport Security Company arimaha ugu waaweynaa ee laga wada hadlayna waxaa kamid ahaa sidii hay’adaasi khibrada dhanka amaanka ah ee ay leedahay Puntland ula wadaagi lahayd .
Safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya Ambassador Josphat k. Maikara iyo kullankii uu Madaxwayne gaas la qaatay safiirkaasi ayaa waxaa laga wada hadlay qodobo ay kamid ahaayen xoojinta xiriirka u dhaxeeya Puntland iyo Kenya oo laysku afgartay.
RW Cabdi Weli: Shaki kuma jiro in Soomaalida dib u dhacday